Nezvedu – د BSY-پلائیوډ ماشین، د وینیر د پیل کولو لاین، وینیر وچونکی، د پلائیوډ هاټ پریس، لاګ ډیبرکر، وینیر کلیپر، ګلو سپیډر، د پلووډ لپاره پری پریس، د پلووډ څنډه تریمینګ آری، د وینیر پیلینګ لیټ
» Company Information » Nezvedu » Nezvedu
Yakatangwa muna 1956, Weihai Baishengyuan Industry Co., Ltd. (iyo yekutanga weihai yekugadzira matanda fekitori) iri muguta rakanaka remahombekombe Weihai, Shandong, China. Iko kuunganidza kutsvagisa nekusimudzira, kugadzira, kushambadzira nyanzvi dzemichina yemapoka makuru emabhizinesi, uye ine kodzero yekuzvitonga yekupinza uye kutumira kunze kwenyika. Mushure memakumi emakore ebudiriro, kambani yagara ichisimbirira kutora nzira yekuzvimiririra innovation, budiriro yesainzi. Ikozvino iri kutungamira zvigadzirwa zvemaseti akazara ekugadzira plywood mutsara zvigadzirwa, ebetsero zvigadzirwa, kutevera kudiwa kwemusika kusimudzira nguva dzose.Zvigadzirwa zvinotengeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu muAsia, Europe, Africa neAmerica.
Bhizinesi ndiro National yepamusoro-tech bhizinesi, Yakapfuura GB/T19001-2016 yemhando yepamusoro manejimendi system certification uye CE certification. Rine matunhu bhizimisi michina budiriro centre, hombe woodworking michina michina tsvakurudzo centre, Shandong Province “imwe bhizimisi uye mumwe michina” tsvakurudzo centre, wekanzuru maindasitiri dhizaini centre, Weihai Wood-Based bhodhi rabhoritari etc. Rine 23 nyika patents, 25 utility. muenzaniso patents, akarayira 10 nyanzvi mwero. Bhizinesi rakahwina “Shandong Province Mubairo Wechitatu weSainzi neTekinoroji Kufambira mberi”, yekutanga inoisa nzvimbo dzekutarisa mupurovhinzi yeShandong zvigadzirwa zvemichina mune yakazvimirira innovation chirongwa. Mubairo wekutanga wezvakabudirira muTechnological Innovation, “mubairo wekutanga wezvigadzirwa zvitsva zvakanakisa” “mubairo wechipiri wesainzi uye tekinoroji mubairo wechina muchina indasitiri” “mubairo wekutanga wekuvandudza mubairo wechina sango chigadzirwa indasitiri nemimwe mibairo”. BSY brand veneer rotary peeling line uye CNC spindleless rotary peeling lathe zvakaonekwa sezvigadzirwa zvine mukurumbira zvemhando mudunhu reShandong.
Bhizinesi iri mutevedzeri wemutungamiri weChina Forestry Machinery Association nhengo uye Administrative unit yeChina machine tool association,forestry equipment industry national innovation alliance director unit,Shandong high-end equipment industry association association nhengo zvikamu,China woodworking machine tool industry “top ten” mabhizinesi ekuzvimiririra innovation, yekutanga batch yemabhizinesi madiki uye epakati “akavanzika shasha” muShandong Province.
BSY inopa michina yakawanda inosanganisira plywood chirimwa, log debarker, veneer single-spindle rotary lathe, veneer spindle-less rotary lathe, veneer dryer, plywood press, plywood edge Trimmer, plywood Sander nezvimwe.
Sevhisi uye kudzidziswa kunopihwa kuburikidza nevashandi vakadzidziswa nehunyanzvi vevatengesi veBSY, kana zvakananga kuburikidza nekambani yevashandi vebasa.
Chinangwa chedu chagara chiri chekupa chete emhando yepamusoro michina nemasevhisi. Zvekare, gamuchirwa kuBSY Indasitiri Boka. Kana iwe uchida rumwe ruzivo rusingawanikwe mune ino webhusaiti, ndapota inzwa wakasununguka kutibata.